Seeraar Debit Card Isbarbar 2018 - Seeraar Credit Card
Seeraar Debit Card Isbarbar 2018 Seeraar Credit Card – Iibso Seeraar la Card Credit
Seeraar Card Debit FAQ
Seeraar Debit Card Isbarbar
TOP Seeraar Debit Card – a Crypto Lacagta Card Isbarbar
Seeraar waa lacag ah internetka – iyo Card a Credit Seeraar, waxaad ku bixin kartaa meel kasta oo dunida ah, halkaas oo Credit- ama Debit Cards la aqbalo leh Lacagta ku Crypto aad doorato. Wada jir ah ula Salada Seeraar a, waxaad bedeli kartaa oo ku saabsan 95% adeegyada oo dhan caadi Bank ah ayaa sidoo kale ku siin kara in aad.
Iyadoo farqiga u weyn in aad leedahay guud ee koontarool aad lacag dheelitirka iyo cid kale. Tani waa mustaqbalka Maaliyadda. Ku raaxayso xorriyadda. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan iibsashada Card Seeraar a, loo hubiyo in si loo hubiyo our “Sida loo doorto” guide below.
Spectrocoin Seeraar Card
Cryptopay Seeraar Card
WageCan Seeraar Card
AdvCash Seeraar Card
CoinsBank Seeraar Card
Uquid Seeraar Card
Xapo Seeraar Card
Spectrocoin Seeraar Card – Waxa Ayidaya iyo Diidaya
+ All dal oo dunida ka mid ah
+ Apps diyaar u ah Windows isticmaala mobile aad
+ kaarka Company waa la heli karaa
ka dhanka ah:
– maraakiibta qaali
– Warbixin fadeexad iyo cabashooyinka
– macluumaadka website-ka maqan
Anonymous Card: Haa
Card caaga: Haa
Card Virtual: Haa
Card Price: caag $9.00/€ 8.00 / £ 6.00 – Virtual $0.50/€ 0.50 / £ 0.50
lacagaha: USD, EUR, iibiyey
Fee Bixid Dibadda: 3%
Fee Bishiiba: $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
Cryptopay Seeraar Card – Waxa Ayidaya iyo Diidaya
+ Saddex lacagaha waaweyn (EUR, iibiyey, USD) ayaa dhamaantood la oggol yahay
+ maraakiibta dunida oo dhan oo bilaash ah
+ Website si fiican loo qorsheeyay iyo fududahay in la isticmaalo
– Kaliya ee muwaadiniinta EU
– qiimaha sare
– lacagta macaamilka Dibadda
Card Price: caag 15 € / £ / $ – Virtual 2.50 € / £ / $
lacagaha: EUR, iibiyey, USD
Fee Bishiiba: $1
WageCan Seeraar Card – Waxa Ayidaya iyo Diidaya
+ Available for dalal badan oo ay ka mid yihiin USA
+ Aasaasayaasha soo jeeda farsamada xoog
+ Available in USD, EUR, iibiyey
+ barnaamijka Bonus
– lacagta kaarka qaali
– Macluumaadka waa ay adag tahay in la helo website-ka
– Kaarka jaban waa out of stock
Anonymous Card: No
AdvCash Seeraar Card – Waxa Ayidaya iyo Diidaya
+ No lacag dayactirka bil kasta
+ Xoqin sida lacagta la heli karo
+ top Free ka soo wareejinta deg deg ah / SEPA, heerka guri kala iibsiga
– No apps la heli karo
– Dalalka Midowga Yurub oo keliya ayaa taageeray
– No macluumaad ku saabsan qaab dhismeedka lahaanshaha ama madaxda sare
– xadka Daily iibsadaan dadka isticmaala xataa xaqiijin
Card Price: caag $/€ 4.99 (14.99 ka dib 7 maalmood) – Virtual 1 + 0.99 $/maalgelinta €
lacagaha: EUR, iibiyey, USD, xoqin
Fee Bixid Dibadda: 2.95%
Fee loading: $/€ 0.99 halkii marba
Fee Bishiiba: Free
CoinsBank Seeraar Card – Waxa Ayidaya iyo Diidaya
+ All-in-mid bixiyaha crypto la jeebka, sarrifka iyo kaarka debit Seeraar
+ Oo ayan ku jirin lacagaha Fiat waaweyn USD, EUR, iibiyey, Kaarka waxaa laga heli karaa in xoqin, CHF, AUD, lacagaha JPY aad iyo aad u awood litecoin xisaabaadka
+ fursadaha card badan oo ku salaysan heerka xaqiijinta
– lahaanshaha Complex oo aan hufan iyo dhismaha shirkadda
– maraakiibta Free waxaa laga heli karaa oo kaliya dadka isticmaala premium
– ajuurada High codsan on POS iyo ATM
Card Price: caag ka $14.95 – Virtual ka $2.95
lacagaha: EUR, iibiyey, USD, xoqin, CHF, AUD
Fee Bixid Dibadda: From 2.5%
Fee Bishiiba: $0.95-$2.95
Uquid Seeraar Card – Waxa Ayidaya iyo Diidaya
+ Available in USD, EUR, iibiyey iyo 40 altcoins kala duwan ag Seeraar
+ iibsadaan noolaa Unlimited iyo qaadashada ATM
+ fursadaha loading badan oo
– Ingiriisi Poor loo isticmaalo website-keeda
– Ma heli karaa dadka deggan Maraykanka
– shirkadda Fresh
lacagaha: USD, EUR, iibiyey iyo 40 altcoins kala duwan
Xapo Seeraar Card – Waxa Ayidaya iyo Diidaya
+ heerka sare ee ammaanka
+ Qaab dhismeedka caasimada Strong
+ No top up ajuurada
– user la xaqiijin leeyihiin xadka dhinca dhaqdhaqaaqa online iyo POS
– Xapo taageertaa Segwit2X
– muwaadiniinta Mareykanka laga saaray
Card Virtual: No
Card Price: caag $20 / € 18 / £ 13
Waa maxay Card ugu fiican Seeraar ii?
Sida loo doorto bixiyaha Card Seeraar xaq u?
Waxaa jira shirkado badan oo bilaabi ups bixinta kaararka debit Seeraar maalmahan sida cryptocurrencies ah waxaa lagu helo caan iyo aad u badan.
Waxaa jira qaar ka mid ah dhibcood in kaarka debit a doonayaa-la Seeraar laga yaabaa in u baahan tahay in la raadiyo marka raadinaya bixiyaha ugu fiican. bixiyeyaasha card wuxuu daaha ka badan oo macluumaad this on goobaha ay, sidaas oo dhan waxa ay qaadataa oo keliya si ay u akhriyaan iyada oo si taxadar leh. Hel macluumaad hore ee shirkadda saaraha kaarka.
Fikradda dhan ka dambeeya Seeraar iyo ledgerka blockchain dadweynaha waa aamin. Sidaas kaarka debit Seeraar yihiin macaamiisha sida caadiga ah ka badan oo laga shakiyo badan macaamiisha in warshado kale. Sidaa darteed bixiyeyaasha waa in ay ku qanciso macaamiisha ay mustaqbalka in ay bixiyaan baddasheen, adeegyada lagu kalsoonaan karo.
Sida caadiga ah bixiyeyaasha bixiyaan adeegyo badan oo ka badan kaar. Qof kastaa wuxuu jeebka, laakiin tusaale ahaan Spectrocoin, Cryptopay, CoinsBank, Xapo oo dhan ay maamulaan is dhaafsi Seeraar iyaga u gaar ah awood Seeraar iibsadaan si toos ah iyada oo loo marayo internetka. Haddii kale user leedahay inaad hantidaan cryptocurrencies ka hor inta loading in kaarka debit Seeraar u kala.
kaarka debit Seeraar AdvCash leeyahay saddex lacagaha Fiat waaweyn sida USD, EUR iyo iibiyey la aqbalo by bixiyeyaasha oo dhan. Xoqin waa lacagta ugu badan ee soo, users Ruush yaabaa inuu kugu amro AdvCash Seeraar kaararka debit meesha xisaabaadka yihiin caawimada ee xoqin.
kaararka caaga iyo dalwaddii waa suuqa. kaararka caaga ah waxaa loo isticmaali karaa soo bixid ATM iyo iibinta online labada, kaararka dalwaddii loo isticmaali karaa online kaliya. Waxaa mudan in hubinta hor inta aadan saxiixin ilaa haddii bixiyaha saarta kaararka caaga ah ama kaliya doorasho dalwaddii waa la heli karaa.
At badan bixiyaha kaarka debit Seeraar, dadka isticmaala laga yaabaa isticmaali kartaa adeegyada xitaa aan xaqiijinta aqoonsiga, inkastoo la limites la dabaqay qaarkood. xadka maalin walba waxaa ka mid ah a, xadka bil kasta iyo noolaa on bixid lacag caddaan ah ama POS iibsadaan. Haddii kale geeddi-socodka xaqiijinta waxaa loo sameeyaa adigoo soo gudbinaya caddeynta ka mid ah aqoonsiga in nooc ka mid ah kaarka aqoonsiga qaranka iyo caddayn ah joogitaanka kaas oo noqon kara biilasha korontada ka la soo dhaafay a 3 bilood ee ugu badan ee kiisaska. Waqtiga loo baahan yahay xaqiijinta kala duwanaan karaan wax badan oo, ka laba saacadood si xitaa 10 maalmood.
Seeraar Debit Card, taas oo ay u doortaan?
Sababo la xiriira sharciyada iyo users arrin sharci oo dalka Mareykanka ah waxaa laga saaray adeegyada, marka laga reebo at CoinsBank oo bixisa adeegyada xaddidan dadka muwaaddinka Mareykanka.
maraakiibta ee qiimaha kaar caag ah waxaa la dhisay khidmadaha kale, sidaas maraakiibta caadiga ah sida caadiga ah waa lacag la'aan, bixiyeyaasha eedeeyay ku saabsan 45-70 USD waayo doorasho bixinta degdega.
Inta badan bixiyeyaasha waxay leeyihiin apps smartphone heli karo si loo hubiyo in dadka isticmaala xakameeyo dhaqaalaha ay ka smartphone. Sida caadiga ah codsiyada macruufka iyo Androids waxaa la siiyaa, laakiin dadka isticmaala telefoonka Windows laga yaabaa in u baahan tahay in ay sii baadhaan, sida ay tahay oo kaliya diyaar u ah macaamiisha Spectrocoin.
Qiimo u goynta Card iyo fii
Kharashka arrinta card bilowga ah waxaa ka bilowda 5 USD in 20 USD la celcelis ahaan 10 USD. Qaar ka mid ah waxay kaarka ku siisaa dalwaddii kaliya, laakiin in kharashka oo kaliya 0.5 USD.
At bixiyayaasha qaar ka mid ah isagoo aan firfircooneyn kaarka aan la ciqaabi laakiin qaar badan oo lacag dheeraad ah, waayo, iyagoo aan firfircoonayn. users firfircoonayn waa kuwa aan xitaa transacting hal mar labadii sano ee la kaarka.
Macaamiisha loading kartaa kaarka la wareejinta silig ama SEPA wareejinta lacagta agagaarka 0.5%-1%. bixiyeyaasha qaarkood waxay khuseysaa heerarka fidsan, si macaamiisha waa lacag bixisid si aad tirada iyo cadadka lacagta laga soo wareejiyay account jeebka si ay kaarka debit dareenka. Waxaa suurto gal ah inaad ku shuban iyo dajinaya bixiyeyaasha lacag kale sida Skrill, Neteller ama PayPal. Qaar ka mid ah kaararka debit Seeraar, Si kastaba ha ahaatee binta ah uu ka badan yahay suuqa kala iibsiga silig, noqon kara 1% si ay u 5% halkii xawaalad.
The bixiyayaasha kaarka debit Seeraar yihiin ganacsi ahaan marka user la transacting la kaarka. In kasta oo ay iibsadaan online yihiin inta badan bilaash ah, laakiin may qaar ka mid ah lacagta ujradda ku saabsan in aad u. ATM waxaa had iyo jeer lagu eedeeyay dhinaca kale. The soo bixid lacag caddaan ah guriga ku wareegsan yahay 2-3 USD, ku soo bixid caalamiga ah waa 3-4 USD, sidoo kale waa suurto gal ah in heerka guri waxaa laga codsadaa ag boqolleyda. Haddii iibka ama bixitaanka lacagta waa ka duwan yahay lacagta default of xisaabta bixiyeyaasha oo dhan ka qaadaan heerka lacagta dheeraadka ah exchange of 3%.
Jawaab-celinta Client iyo Experience User
adeegga Good bilaabataa a page degtey wanaagsan. Waa in si cad waa maxay adeega iyo inta ay le'eg immisa qiimaha. Macaamiisha u isticmaali website-ka si aad u hesho macluumaad la xiriira oo ku saabsan adeegyada ay bixiyaan. Oo ayan ku jirin dhisme menu cad oo FAQ; bixiyeyaasha waa in ka mid ah ka shaqeynayaan raadinta dhexdeeda ah. qancinta macaamiisha weyn ku xiran tahay taageerooyinka ay bixiyaan ka soo saara kaarka debit Seeraar, sida nidaamka Ticket, Hotline chat Live.
Waxaa jira fursado badan bixiyaha card Seeraar a siin karaan in ay macmiilka. Bixiyaha kaarka debit Seeraar fiican ku xiran yahay gaar ah baahiyaha user ee.
Seeraar Card Isbarbar
loogu talagalay by Themient